Talobixin caafimaad oo afsoomaali/Sjukvårdsrådgivning med tolk på somaliska - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Talobixin caafimaad oo afsoomaali
Sjukvårdsrådgivning med tolk på somaliska
Hadda waxad telefoon ahaan ku heli kartaa talobixin caafimaad oo Af Soomaali ah.
Hadda waxad waci kartaa 0771-1177 91 haddii adiga ama ilmahaagu jirrado, is dhaawaco ama u baahanyahay talobixin caafimaad. Markaa waxad la hadli kalkaaliso caafimaad ayadoo Af Soomaali lagaaga turjumayo.
Waxad u waci kartaa dhammaan su´aalaha quseeya daryeelka caafimaadka iyo jirrada, dhibaatooyinka yaryar iyo kuwa waaweynba. Haddii aad u baahantahay inaad daryeel caafimaad hesho, waxay kalkaalisadu kaa caawinaysaa helitaanka xarunta caafimaad ee saxda ah.
Adeeggani wuxu furanyahay maalin kasta 08.00-22.00, waxanu la qiimo yahay hadal telefoon oo caadi ah.
Talobixinta caafimaad ee telefoonka ah darteed, uma baahnid in aad aaddo qaabilaadda degdegga ah ama xarunta xannaanada caafimaadka, ayada oo aanay qasab ahayn. Waxa kuu baaqanaya wakhti iyo lacag labadaba.
Talobixinta caafimaad ee telefoonka oo turjumaan leh, waxa la tijaabinayaa laga bilaabo 3 diisember 2012. Markaa ka dib ayaa go´aan laga gaarayaa haddii adeeggani sii jirayo. Sidii caadiga ahayd ayaad u booqan kartaa 1177.se ama u waci kartaa 1177 si aad caawimo iyo warbixin ugu hesho Af Iswiidhish, 24-ka saac. Haddii aad u baahantahay ambalaas, waxad mar walba wacaysaa lambarka degdegga ee 112.
Hage-haaga daryeelka caafimaadka ee gobolka Skåne
Wac lambarka1177 ama booqo bogga 1177.se, si aadu hesho talo ku saabsan caafimaadka 24-ka saacadood.
1177 wuxu bixiyaa warbixin ku saabsan cudurada iyocaafimaadka, waxanu kaa caawinayaa in aad hesho meesha saxda ah.
Waxa kale oo aad la xiriiri karta xaruntaada xannaanadacaafimaadka haddii aad jirrato, is dhaawacdo ama aad u baahantahay talobixin ku saabsan caafimaadka. Meelo badan ayaa furan xiitaa habeenkii iyo fasaxyada.
Marka ay jirto xaalad halis ahi, wac lambarkan 112.
Anna Möller, 1177.se, Region Skåne